Kuyinto yokulondoloza imvelo "Nenetsky" enhlonhlweni volvulus Russian oLwandle uBarents. Thina ugcinwe unjengoba unjalo lapha kuphela eYurophu emathafeni flat zasezindaweni ezibandayo Arctic, lapho isembozo iqhwa ihlala izinsuku 231 ngonyaka.
Kuyinto indawo yemvelo izilwane ezingavamile futhi izinyoni (i-loon ophuzi-ukhokhiswe, umkhomo bowhead, njll), kuphi izitshalo zikhule, eziningi zazo kufakwe Incwadi Red. Reserve ngenxa remoteness of insimu yalo kusukela amabhizinisi ezinkulu ezimbonini liyindinganiso ubuhle acwebile we emathafeni enyakatho.
On umlando ukutholakala
Nesidingo sokuthola inqolobane anjalo esikhathini Nenets Autonomous District of Russia kwabangelwa ezicini eziningana: anda umthelela yabantu ukuhlola Geological izinkampani ekuthuthukiseni uwoyela negesi kanye namasimu asemaphandleni; ukukhula ukuklaba kwezinkomo ngokweqile kuqothula wezinyamazane yasekhaya; ukungcoliswa komhlaba ngenxa zokukhiqiza.
Zonke lezi zici ziye zaholela izinguquko ezinkulu zemvelo - ukubhujiswa nokuhlushwa kwala futhi ukubhujiswa okuphelele kwalelizwe inhlabathi kanye izimila ikhava, baqinise engemihle futhi engadingeki geomorphological izinqubo, ukuhlelwa kabusha nokwehlisa reindeer emadlelweni, ukuphazamiseka umbuso kwamanzi phezu izindawo ezinkulu. Kule ndaba, ngo-December 1997, ngesikhathi kuphela esiqiwini kwakuhlelwa Lesinqumo LoMkhandlu Uhulumeni waseRussia. Kamuva waba eyaziwa njenge "National egicna imvelo" Nenets "."
Bese bebeka "Nenets" ngo-2010 waba elikulo.
Bekela eceleni for reserve "Nenetsky" ndawo European standard enyakatho yeRussia. Ihlangabezana ngokugcwele emigomweni lwento kwemvelo.
Lonke ndawo itholakala ngaphakathi kwe-Arctic Circle futhi wageza ngasemanzini yayo kanye uBarents Sea Caves. ezwekazini agodliwe etholakala engxenyeni esenyakatho ye-mpumalanga yesifundazwe Malaya Zemlya emathafeni oluthatha nhlonhlo volvulus isiRashiya, isiqeshana 20-ikhilomitha komhlaba ububanzi ngasogwini Zakharyin, ingxenye delta (ngomlomo) k. Futhi Pechora soMfula. East Neruta. Futhi kule ndawo ihlanganisa iziqhingi Green, Lovetskiy, Kashin, Green Mura no cishe ingxenye enkulu yoLwandle uBarents (eningizimu-mpumalanga) nabanye.
Le ndawo amanzi kwengxenye endaweni indawo esiqiwini sika. Lokhu Korovinskaya futhi Bolvansky izindebe amanzi kanye Shore Zakharyin (ububanzi 10 km), yonke indawo amanzi (km 2) kombhala Peninsula Russian, njll Nenetskii wokugodla ihlukaniswe 4 izingxenye :. Ostrovnoy Bolvansky, delta p. Pechora futhi Zakhar'in Beach.
Tinhlobo tetitfutsi, lapho ungathola kuze kufike endaweni ebekelwe phezu Naryan-Mar (100 km): ezithuthuthwini (ebusika), izikebhe (ehlobo).
Mayelana nesimo sezulu
Isimo sezulu Arctic zasolwandle Reserve. Ebusika, izinga lokushisa emoyeni lehla -46 0 C. Isilinganiso amplitude yaminyaka yonke isilinganiso lokushisa nyangazonke imayelana 29 0 C ngo-February - ngenyanga ka okokuqandisa, kanye olufudumele July.
Njengoba kuphawulwe ngenhla, isembozo iqhwa agcinwe lapha iningi isizini, kanti engxenyeni esenyakatho esiqiwini embozwe yiqhwa kuze kufinyelele 40 amasentimitha obukhulu ngokwesilinganiso. Isibalo izinsuku nge blizzards cishe 112. Esikhathini nezikhathi enomoya konyaka kule ndawo ubuswa umoya waseningizimu-entshonalanga naseningizimu, ukuba ukufudumala - imimoya amaphuzu esenyakatho ikhampasi.
Relief Nenets reserve
Insimu wokugodlwa sezwe flat. Cishe emhlabeni Yandisa elisezansi kakhulu waqala ukugcwala ngeziteshi eziningi kanye namachibi ezinobukhulu obuhlukahlukene. Amaxhaphozi izinhlobo: hummock-eziyize, bulala-okungenalutho, ezincane-hummocky.
masimu Marine kwasuka engxenyeni esenyakatho yezwe, kanye nebanga eningizimu endaweni ezingeni sinyukile kancane. Amasimu Nenets reserve abe surface flat, ne emigodini izimbuku emachibini amancane.
Izimila Nenets Reserve libonisa emathafeni ejwayelekile futhi arctic ubuswa imiphakathi moss futhi ulele.
Ukwakheka zinhlobo luhlukaniswe zinhlobo ezilandelayo izimila imiphakathi: nezihlahla (willow, birch yemifino kanye itiye Labrador), izihlahlana ulele nezimfunda moss, emaxhaphozini, willow futhi melkotravnye zezikhotha (utshani kanye namakhambi).
izitshalo Umhlinzi we inqolobane has 339 zinhlobo futhi zenyathi (basonta imindeni 56). Izitshalo abacebe is ebonwe sifinyelela engezansi delta emfuleni. Pechora. Found lapha ezingaphezu kuka-200 zezinhlanzi. INcwadi Red efakwe ohlwini 32 zezitshalo semithambo zonke ezikhula esiqiwini: Ugra poppy, Rhodiola rosea, Pinguicula Alpina, Dryas octopetala, Cassiopeia tetrahedral nabanye abaningi.
Ilokhu esiqiwini Nenets iyikhaya izilwane: impungushe, impungushe ezimhlophe, Ermine, amaphiva, ob futhi arctic lemming, Wolverine, nonogwaja. It ngokuvamile itholakala enhlonhlweni Russian kombhala futhi iziqhingi uBarents Sea (eningizimu-asempumalanga ingxenye) polar bear.
Emanzini avikelekile kuhlala ezincelisayo zasolwandle - pinnipeds futhi izilwane zasemanzini ezincelisayo. Eziyivelakancane lwezimpawu grey nehabhu, baleen imikhomo, futhi eminingi - the isilwane sasolwandle esikwaziyo futhi ukuphila ngaphandle ezweni esinamazinyo azingxavula , umkhomo beluga uphawu, ulwandle nonogwaja.
Kukuphi lapho loyibona ezihlukahlukene izilwane kangaka ezisesandleni Nenets Reserve? Waba engokwemvelo onokwethenjelwa izidalwa eziphilayo njengoba Atlantic isilwane sasolwandle esikwaziyo futhi ukuphila ngaphandle ezweni esinamazinyo azingxavula , omkhulu bowhead whale, emathafeni nefukezi, loon ophuzi-ukhokhiswe, kanye nabanye.
Esiqiwini umzila kufuduka (East Atlantic), izinhlobo eziningi zezinyoni. indawo Reserve sika - i focus ebalulekile kabusha imiphakathi izinyoni (Waterfowl). Ngesikhathi sasehlobo, kukhona enkulu zinhlobo ukwehluka lamellirostral yabo ngenxa (black scoter, ihansi elimhlophe-fronted, emabhontjisi ihansi, Eider, njll) Futhi kulezi zinyoni. Herring gull isidleke ezindaweni kwimfunda, kanye amakoloni enkulu esibonelweni arctic - ku esephimisela anesihlabathi. Izikhova, ptarmigan, peregrine uheshe, ukhozi elimhlophe-tailed, Buzzard anolaka-ezinemilenze, merlin, merlin, njll Futhi zihlala lapha.
A uphawu isayensi nokuvikeleka umsebenzi Nenets Reserve namuhla kukhona Waterfowl elandelayo: ezimbili izinhlobo goose enyakatho ezincane (barnacle ihansi kanye ezincane ezimhlophe) nezimfunda (aka encane) Swan.
Phakathi izinhlanzi zibaluleke kakhulu kulezi zindawo kuyinto eyinkimbinkimbi whitefish: peled, whitefish, whitefish, Cisco futhi whitefish. Futhi, ngokusebenzisa ingxenye kolwandle Umgede (eningizimu-mpumalanga) indlela uyagijima salmon ukufuduka.
Esiqiwini izivakashi zayo uphiwa izinhlelo hambo oluthakazelisayo: ukuqapha zezinto eziphilayo kuqhathaniswa imihlambi yezinyoni eziyivelakancane (Ornithology amateur), i uhlobo okwedlulele ebusika holiday eqhweni futhi ehlobo phakathi kwezwe ebabazekayo. Lapha ungakwazi futhi iqhaza izinkambo semvelo.
Esiqhingini-Arctic Reserve "Nenets" itholakala nge eziningana izikhumbuzo zomlando namasiko elihlobene ne ukuthuthukiswa isiko Nenets abantu (engcwele ezihlukahlukene izimfanelo lomhlatshelo - Thixo, izingebhezi zamakhanda amabhere, izinyamazane izimpondo, amathambo lezilwane zomhlatshelo, njll).
Kusukela 2000, iziteshi kanye zokupaka amabili ihlelwe esiqiwini kwezivakashi.
Ekugcineni, omunye iqiniso elithakazelisayo
It kuvela ukuthi ukwahlulela ngalo isimo isimo kwemvelo e-Arctic Kulula kakhulu - nje unake baphile khona inyoni ezingavamile kakhulu - Umbala (ezincane) ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi.
lezi zinyoni ku Nenets Autonomous District - izinkomba sizwele kwemvelo. Lapho nokuwohloka kwemvelo, ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi shintsha ngokushesha endaweni yawo.
Izingane Sihoxisiwe: ukubulala noma njengento edingekayo?
Kuyini Beckwith Wiedemann syndrome, kanjani ukuthi kuziveza?
Bakha isisekelo ngoba isikwele ubuso